Mayelana NATHI - Hangzhou Dongshen Machinery Engineering Co., Ltd.
I-Hangzhou Dongshen Machinery Engineering Co., Ltd iyinkampani esebenza ngokukhethekile nemishini ye-EPS, isikhunta se-EPS kanye nezingxenye zokungcebeleka zemishini ye-EPS. Singahlinzeka ngazo zonke izinhlobo zemishini ye-EPS njenge-EPS Preexpanders, i-EPS Shape Molding Machines, i-EPS Block Molding Machines, i-CNC Cutting Machines njll. nabo, futhi sisiza izimboni ezindala ze-EPS ukuthi zithuthukise ukukhiqizwa kwazo ngokunciphisa ukusetshenziswa kwamandla nokwandisa umthamo wokukhiqiza. Ngaphandle kwalokhu, sinikela ngenkonzo yokuklama imishini ekhethekile ye-EPS njengokucela kwamakhasimende. Siphinde futhi senze isikhunta se-EPS seminye imishini ye-EPS evela eJalimane, Korea, Japan, Jordan njll.
Siphinde futhi senze isikhunta se-EPS seminye imishini ye-EPS evela eJalimane, Korea, Japan, Jordan njll.
I-Hangzhou Dongshen Machinery Engineering Co, Ltd
Elinye ibhizinisi lethu elibalulekile umugqa wokukhiqizwa kwempahla eluhlaza. Sineqembu lobuchwepheshe lobungcweti lokuklama isitshalo se-EPS eluhlaza, ukuhlinzeka ngefomula elisezingeni lokuqala lokukhiqizwa kobuhlalu be-EPS, nokwengamela ukwakhiwa kwephrojekthi ye-resin esizeni. Sinikeza yonke imishini yokukhiqiza izinto zokusetshenziswa ze-EPS, njengeziphenduli ze-EPS, amathangi wokuwasha e-EPS, imishini ye-EPS sieving njll. Siphinde sinikeze izinto zokwenziwa kwamakhemikhali zokukhiqiza ubuhlalu be-EPS, njenge-HBCD, DCP, BPO, i-ejenti yokumboza njll.
Kwesinye isikhathi sisiza amaklayenti ukuthi athole izinto azicelile. Ngenxa yokwethembeka kwethu nokuzibophezela kwethu, amaklayenti amaningi asebenze nathi iminyaka engaphezu kweyishumi. Bayasethemba, ngakho-ke basithatha njengehhovisi labo lokuthola izinto eChina. Siyabasiza ukuthi bathole abahlinzeki abahle futhi sibahlolisise ngekhwalithi lapho bezizwa kunzima ukuhamba. Sihlala sibheke phambili ekubambisaneni kwesikhathi eside, futhi siyabazisa ubudlelwano nawo wonke amaklayenti.